"Waan Ogahay In Koeman Doonayo Salah Oo Salah Qudhiisuna Barcelona Doonayo Laakiin....." - Halyeey Ree Holland Ah Oo War Weyni Kasoo Yeedhay - Gool24.Net
“Waan Ogahay In Koeman Doonayo Salah Oo Salah Qudhiisuna Barcelona Doonayo Laakiin…..” – Halyeey Ree Holland Ah Oo War Weyni Kasoo Yeedhay
September 13, 2020 Apdihakem Omer Adam
Xiddigii hore ee xulka qaranka Netherlands ee Sjaak Swart ayaa shaaca ka qaaday sheeko layaab leh oo garabka weerar ee Liverpool ee Mohamed Salah la xidhiidhinaysa kooxda uu ninka ay isku wadanka yihiin tababaraha ka yahay ee Barcelona.
Luis Suarez ayaa aad ugu dhaw inuu iskaga tago Barcelona kaddib mudo uu muhiim usoo ahaa kooxdaas, dhaliyaha Inter Milan ee Lautaro Martinez ayaa ahaa bedelkiisa inta ugu badan laga dooday balse Swart ayaa aragti kale qaba.
Sida uu sheegayo Sjaak Swart, tababare Ronald Koeman ayaa doonaya inuu Liverpool kasoo qaato xiddiga ugu muhiimsan safkeeda weerarka halka uu sidoo kale sheegay in Mohamed qudhiisu Camp Nou inuu ka dego rabo.
Swart oo aragtidiisa u sheegay DAZN ayaa yidhi “Waan ogahay in Koeman uu isaga doonayo waanan ogahay in Salah uu jeclaan lahaa inuu tago, laakiin ma sheegi karo halka xogtu ka timid”
Sida uu sheegay wargeyska Talyaaniga kasoo baxa ee Corriere dello Sport, Barcelona ayaa wakiilka weyn ee Jorge Mendes weydiisatay inuu kala shaqeeyo iibka xiddigo dhawr ah si ay lacag ugu helaan saxeexa Lautaro balse ilaa hadda wax dhaqaaq ah lama samayn.
Heshiis ay Barcelona kula wareegto Mohamed Salah ayaan marnaba noqon doonin mid ka sahlan Lautaro Martinez balse kooxda ayaa isku day samayn karta.
Blaugrana ayaa tababare Jurgen Klopp u bandhigi karta heshiis ciyaaryahano is-dhaafsi oo ay ku siinayaan xiddigii uu Klopp qudhiisu kula saxeexday Borussia Dortmund ee Ousmane Dembele.